အမြန်လမ်းပေါ် လမ်းလယ်ကျွန်းကို တိုက်မိပြီး ရပ်နေသော ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကို ခရီးသည်တင် ယာဉ် ထပ်တ?? - Yangon Media Group
အမြန်လမ်းပေါ် ဘီးပေါက်ပြီး လမ်းလယ်ကျွန်းကိုတိုက်ပြီး ရပ်နေသော ကိုယ်ပိုင်ကားအား Elite ခရီးသည် တင်ယာဉ်က နောက်မှ ထပ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံတားဦးမြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၃၄/ ၄) အနီးတွင် ဇူလိုင် ၂၇ရက် နံ နက် ၅နာရီကျော်က နေပြည်တော်မှ မန္တလေးသို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ်နေ ယာဉ်မောင်း ဦးသန်းထွန်း အောင် (၅၃)နှစ်မောင်းနှင်လာသည့် Hilux Surf အမျိုးအစား ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် အခင်းဖြစ် နေရာအရောက် ရှေ့ဝဲဘက်ဘီး ပေါက်ပြီး အရှိန်လွန်ကာ လမ်းလယ်ကျွန်း ဘာတုံးအား ဝင်တိုက်ပြီး နောက်ရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ နောက်လားရာတူအတိုင်း အနောက်မှ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် သင်္ဃန်းကျွန်း ကြီးကျေးရွာနေ ယာဉ်မောင်း ဦးတင့်ကျော် (၄၉)နှစ်မောင်းလာသည့် Elite ခရီးသည်တင် Express ယာဉ်မှ Hilux Surf ယာဉ် အား ထပ်မံဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း စကားအင်းအမြန်လမ်းမကြီး မီးသတ်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် Elite ယာဉ်ပေါ်မှ ခရီးသည် မတစ်ဦး အနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲသဖြင့် တံတားဦး ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် Hilux Surf ယာဉ်မှာ ကျပ်သိန်း ၆ဝ နှင့် Elite ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှာ ကျပ် ၁၅သိန်းဖိုးခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ စကားအင်းအမြန်လမ်းမကြီး မီးသတ်စခန်းမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ” Surf က ဘီးပေါက်ပြီးတော့ လမ်းလယ်က ဘာရီယာတုံးကို ဝင်တိုက်ပြီးတော့ ကားရပ်သွားတာ။ အဲ့မှာ ယာဉ်ပေါ်ပါတဲ့လူတွေက ဆင်းသွားတယ်။ ဆင်းသွားတဲ့အခါ နောက်က Express က အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲရပ်ထားတဲ့ ကား ကိုဝင်တိုက်ဖြစ်တာ။ ထပ်တိုက် တာပေါ့။ ဆင့်တိုက်တာပေါ့။ Express ပေါ်ကခရီးသည် တစ် ယောက်ပဲ ဒဏ်ရာရတာ။ Surf ကတော့ တော်တော်လေးပျက်စီးသွားတယ်” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ယင်းယာဉ်တိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စကားအင်းအမြန်လမ်းမ ကြီးရဲစခန်းမှ Hilux Surf ယာဉ် မောင်း ဦးသန်းထွန်းအောင်အား ယာဉ်(ပ) ၁၆/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၂၇၉ နှင့် Elite ခရီးသည်တင် Expressယာဉ်မောင်း ဦးတင့်ကျော်အား ယာဉ်(ပ)၁၇/ ၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃၃၇ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားသည်။
အမေရိကန် ဒုသမ္မတ မိုက်ခ်ပန့်စ်က ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ပေးရန??
လက်စတာကဲ့သို့ မျှော်လင့်မထားရန် ပရိသတ်များအား ရေနီယာရီ သတိပေး